हामीले लगाइरहेको मास्क कति गुणस्तरीय छ ? के मास्कले भा’इरस रोक्न सक्छन् ? «
हामीले लगाइरहेको मास्क कति गुणस्तरीय छ ? के मास्कले भा’इरस रोक्न सक्छन् ?
प्रकाशित मिति :9September, 2020 10:33 am
तपाईं हामीले लगाइरहेको मास्क कति गुणस्तरीय छ ? के यी मास्कले भा’इरस रोक्न सक्छन् ? पछिल्लो समय नेपालमा पनि मास्कको उत्पादन बढिरहेको छ। तर अहिलेसम्म नेपालमा मास्कको गुणस्तर नाप्ने मेसिन भने छै’न। नेपालमा उत्पादन भैरहेका र आयात भैरहेका मेडिकल सामानको गुणस्तर मापनको व्यवस्था गर्न नसक्दा जो’खिम निम्तिरहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन्।‘हामी मास्क खोज्दा यस्तो र उस्तो गुणस्तरको भन्छौँ’, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्टार कृष्णप्रसाद अधिकारीले भन्छन्, ‘तर जाँच्ने मेसिन ल्याउदैनौँ।
‘ अधिकारीले विगतमा नेपालबाट भारतमा लगेर यस्ता सामानहरु त्यहाँको ल्याबमा परीक्षण गर्ने गरेको भएपनि अहिले यातायातलाई कारण देखाएर नगरिएको बताउँछन्। ‘हामीले उद्योग वाणिज्य महासंघलाई नै बोलाएर गुणस्तरबारे कुरा गर्‍यौँ, उत्पादनमा गुणस्तरको कुरा गर्‍यौँ’, अधिकारी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि गुणस्तरको कुरा गर्दा होहल्लामै कुरा टुङ्गियो। निर्णय भएन।‘ तीन महिना अघि देखि गुणस्तरको विषय उठाइएको भएपनि निर्णय नभएको उनले बताए।
मास्कको मात्र हैन विज्ञहरुले नेपालमा अहिले को’रोना जाँच्न राखिएका ल्याबहरुको गुणस्तर जाँच नभएकोमा प्रश्न उठाएका छन्। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का रजिष्टार पुष्पराज खनालले पिसिआर राखेपछि पनि त्यसले राम्रो सँग काम गरे नगरेको जाँच्ने काम राज्यबाट नभएको बताउँछन्। जसका कारण फरक फरक ल्याबमा फरक फरक नतिजा आउने गरेको उनले बताए।